မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ပျက်စီးစေမယ့်အကြောင်းရင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၄) ခု
Home Lotaya မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ပျက်စီးစေမယ့်အကြောင်းရင်းကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၄) ခု
ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးတွေကို ပျက်စီးစေချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို စည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ မေမေတို့ကလေးတွေ ပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းတွေ/ boundaries တွေကို သတ်မှတ်ပါ
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကနေ ကယ်တင်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ boundaries တွေနှင့် စည်းမျဉ်းတွေကို စောစောစီးစီးသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ အစပိုင်းမှာ လွယ်လွယ်ကူကူလက်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် boundaries တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်ဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် (အိမ်စာတွေမပြီးခင် TV ရှေ့မရောက်စေဖို့ကနေ တစ်ခြားလူတွေကို ကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့နှင့် ငြင်းတတ်ဖို့)အထိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနှင့် သူတို့ရဲ့ boundaries တွေကို သတ်မှတ်ပေးပါ။
၂။ သူတို့ရဲ့ အလုပ်ကျင့်ဝတ်တွေကို တည်ဆောက်ပေးပါ
မေမေတို့ရဲ့ ကလေးကို ကမ္ဘာကြီးကို ပေးချင်တယ်ဆိုရင် အော်ဟစ်ဆူငေါက်တာတွေရှောင်ကြည်ပါ။ သူတို့လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကူညီပေးပါ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ ကျင့်ဝတ်တွေ၊ အယူအဆသဘောတရားတွေကို နားလည်ဖို့ သင်ကြားပေးပါ။
၃။ ငွေရဲ့ တန်ဖိုးအကြောင်း ပြောပြပါ
ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ကလေးတွေဟာ တန်ဖိုးနှင့် စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုတွေအကြောင်း နားမလည်ကြပါဘူး။ မေမေတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ငွေရဲ့ တန်ဖိုးးနှင့် သူတို့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေအကြောင်း သင်ကြားနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေဖန်တီးပါ။
၄။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူတွေကို ဥပမာအနေနဲ့ ဦးဆောင်ပါ
ကလေးနဲ့အတူ စကားပြောဆိုနေစဉ်အတွင်း ဒေါသထွက်တာတွေ၊ ရန်လိုတဲ့အပြုအမူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ပါ။ မိဘတစ်ဦးရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ ကလေးငယ်အပေါ် သက်ရောက်မှုတွေများစွာရှိနေတာကြောင့် ဘယ်လောက်ပဲဒေါသထွက်နေပါစေ ကလေးကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာပဲ စကားပြောဆိုသင့်ပါတယ်။
Previous articleသားသားမီးမီးတို့ အစာမကြေမဖြစ်ရလေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
Next articleဘေဘီလေးတွေ နို့စို့ရင်း သီးတတ်ကြတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဘာလုပ်ပေးမလဲ?
သင်ဟာ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်
အလွန်အမင်းကာကွယ်ပေးသော မိခင်တွေရဲ့အမူအကျင့် (၈)ခု
ပိုပျော်ရွှင်ရသော ပိုကောင်းသော မေမေတို့ဖြစ်စေဖို့ မေမေတို့အတွက် Challenge (၈) ခု
စစ်မှန်တဲ့ဘဝနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ခံစားသိရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေဖြစ်စေဖို့အတွက် သိကောင်းစရာများ
Mom and Baby179
ကလေးတွေအား အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေကို ဘယ်လိုသင်ပေးမလဲ?
Nandar Lwin - February 10, 2021 0